खुट्टा फर्किनु भनेको के हो ? यसबाट बच्ने घरेलु उपाय ! - आयो खबर
खुट्टा फर्किनु भनेको के हो ? यसबाट बच्ने घरेलु उपाय !
२०७४ आश्विन ३१ प्रकाशित ००:२४
असोज ३१, काठमाडौँ । कुनै समय मानिसको खुट्टा (छेपारी) को मांशपेसी फर्किने गर्छ । त्यसरी फर्किएको समयमा मानिस अपाङ्ग जस्तै हुन्छ । ऊ हिँड्न सक्दैन । दैनिक कामकाज गरिरहेका बेला धेरै व्यक्तिले भोगिरहेको समस्या हो यो । आखिर के हो त यो ? किन यस्तो हुन्छ ? यस्तो नहुन के गर्नुपर्छ ? आउनुहोस् हेरौँ डाक्टरहरूका कुरा ।
यस समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि आरामदायी बसाई तथा धेरै मात्रामा केरा, आलु, हरियो सागपात, प्रशस्त पानी पिउने, दुध उमालेर पिउने र स्याउ खानुपर्ने चिकित्सकहरू सर्वसाधारणलाई सुझाउँछन् । त्यस्ता खाद्यपदार्थबाट मानव शरीरमा क्यालसियम र पोटासियम प्राप्त भई खुट्टा फर्किने समस्या कमी हुने गर्दछ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार महिनामा एक÷दुई पटक खुट्टा फर्केमा स्वास्थ्य चौकीमा जाँच गराउनु उपर्युक्त हुन्छ ।
प्रकाशित | २०७४ आश्विन ३१ प्रकाशित ००:२४
सुनिताको ‘लौ न बोलिदेऊ’ गीत सार्वजनिक
नगरप्रमुखको व्यक्तिगत सुविधा समाजलाई